» नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत राजस्व समिति गठन, को को परे जिम्मेवारीमा ?
नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत राजस्व समिति गठन, को को परे जिम्मेवारीमा ?
२०७८ भाद्र १०, बिहीबार २१:१३
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गत राजस्व समिति गठन भएको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल कोअर्डिनेटिङ उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय परिषद सदस्य राहुलकुमार अग्रवाल संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । समितिको सहसंयोजक वरुण तोदी रहेका छन् ।
समितिमा अमित मोर, आशिष अग्रवाल, गौरव गोयल, ताराप्रसाद पौडेल, दिलिप अग्रवाल, द्विराज शर्मा, नरेश दाश, मनिष खेमका, विक्रम सिंघानिया, विदुशी राणा, विवेक दुगड र सौरभ दुगड रहेका छन् ।